Maxaa ku Qarsoon Waallida Diblomaasiyadeed ee Kenya ku dhaqaaqday..? [Talo ku socota madaxda Somalia] | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Maxaa ku Qarsoon Waallida Diblomaasiyadeed ee Kenya ku dhaqaaqday..? [Talo ku socota madaxda Somalia]
Tallaabada ay qaadatay dowladda Kenya ee ay xiriirka diblomaasiyadeed ugu jartay Soomaaliya ayaa noqotay mid lama filaan ah oo ku soo beegantay xilli aan la fileyn, iyadoo xiriirka labada dal uu marayey heerkii ugu fiicnaa.
Mar kaliya ayey dowladda Kenya abuurtay xiisad diblomaasi kadib markii ay u yeeratay safiirkeedii magaalada Muqdisho, kuna amartay safiirkii Somalia inuu dalkeena isaga baxo, waxayna sababta ka dhigtay in Somalia ay xaraash ama iib ku bixisay xuduud ka mida badda lagu murusan yahay ee Kenya sheegato, waxayna si ulakac ah u weeraray dowlada Somalia.
Qoraalka Dowladda Kenya iyo sida uu u hadlay xogahaya wasaaradda Arrimaha dibadda ee dalkaasi Macharia Kamau marka la eego waxaa su’aalo badan ka dhalanaya ujeedka Kenya arrintan ka leedahay, waxaana muhiim ah in madaxda Soomaaliya ay si weyn uga fiirsadaan arrintan inta aysan jawaab ka bixin.
In Somalia iyo Kenya ay isku hayaan dacwad ku saaban xuduudka Badda ee labada dal u dhaxeeya oo hortaalla Maxkamadda Cadaaladda Adduunka.
Dowladda Kenya waxay ka cago jiiday dacwadda badda ee Somalia ay u gudbisay Maxkamadda Adduunka, waxayna mar kasta u taagan tahay in madaxda Soomaalida cadaadiso.
Iyadoo ay arrimahaas oo dhan jiraan ayaa waxaa isk cad in Kenya ujeedkeedu yahay arrimaha soo socda:
In dowladda Kenya ay ka hor dhaceyso dacwadda maxkamadaha adduunka ee ICJ oo laga yaabo in laga xukmiyo.
Inaan marna laga aqbalin Kenya inay yareysato Qaranimada Somalia, isla markaana aan wax tanaasul ah laga sameyn Dacwadda badda ee taalla Maxkamadda Cadaaladda Dunida.
Previous articleAKHRISO: Dowladda Kenya Qoraal 15 Qodob ah kasoo saartay xiriirka Somalia [Dagaalkii Xuduud Badeedka oo qarxay]
Next articleSafiir Tarsan oo Qoraalkii looga Dalbaday inuu ka baxo Kenya loo gacan gelinayo [SAWIRRO]